ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် နစ်ဆန်းဝင်းရုတ်များ | နစ်ဆန်းဝင်းရုတ် ကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Estate Car (29)
Lks 168 ညှိနှိုင်း
Pearl White Nissan Wingroad 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလ...
Lks 179 ညှိနှိုင်း
Silver Nissan Wingroad 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြံ...
Lks 177 ညှိနှိုင်း
Silver Nissan Wingroad 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြံ...
White Nissan Wingroad 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ပြ...
Lks 170 ညှိနှိုင်း
Pearl White Nissan Wingroad 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလ...
Lks 155 ညှိနှိုင်း
Lks 152 ညှိနှိုင်း
Pearl Gold Nissan Wingroad 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလု...
Lks 192 ညှိနှိုင်း
Blue Nissan Wingroad 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Lks 160 ညှိနှိုင်း
Silver Nissan Wingroad 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မျ...
Lks 162 ညှိနှိုင်း
Lks 157 ညှိနှိုင်း
Grey Nissan Wingroad 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ...
Grey Nissan Wingroad 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Lks 182 ညှိနှိုင်း
Silver Nissan Wingrad 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
Lks 173 ညှိနှိုင်း
Silver Nissan Wingroad 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြံ...
Lks 189 ညှိနှိုင်း
Pearl White Nissan Wingroad 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလ...
Lks 175 ညှိနှိုင်း
Lks 181 ညှိနှိုင်း
Black Nissan Wingroad 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
Lks 186 ညှိနှိုင်း
Lks 165 ညှိနှိုင်း
Lks 79 ညှိနှိုင်း
Pearl White Nissan Wingroad 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Pass...
Lks 107 ညှိနှိုင်း
Silver Nissan Wingroad 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger...
Lks 85 ညှိနှိုင်း
White Nissan Wingroad 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger....
Silver Nissan Wingroad 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag:...
အေဒီဗန်ရဲ့ မျိုးကွဲဖြစ်တဲ့ ဗန်ကား ၀င်းရုတ်ပ်များ
နစ်ဆန်း ၀င်းရုတ်ပ်များ ဟာ နစ်ဆန်း အေဒီဗန် ကနေ ပုံစံ ကွဲထွက်လာတဲ့ ကားအမျိုးအစား တစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းမှာ အေဒီ ဗန်ရဲ့ အနောက် လူစီးနင်းလျက် ရှိကြတဲ့ ကား တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ နစ်ဆန်း အေဒီ ဗန်က ဆင်း သက်လာပေမဲ့ အေဒီ ဗန်လို ကားအကြမ်းထည် မဟုတ်ဘဲ အရောင်တွေနဲ့ စုံလင်စွာ တွေ့နိင်ပါတယ်။ ဟိုမရာက် ဒီမရောက် ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် လူကြိုက်နှစ်သက်မူ ရှိပေမဲ့လို့ လူစီး သိပ်မရှိပါဘူး။ အေဒီဗန်ကို ပုံကြမ်းလို့ အရောင် တစ်မျိုးလောက်သာ ရလို့ မကြိုက်ကြသူများကတော့ နစ်ဆန်း ၀င်းရုတ်ကို ရွေးကြပါတယ်။ ၀င်းရုတ်မှာ အရောင် တော်တော်များများ ရွေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထုတ်တာကတော့ အေဒီ ဗန်ကနေ ကွဲထွက်လာတာ ဖြစ်ပြီး ဒီဇိုင်းမှာ မသိမသာကွာပါတယ်။ အရှေ့က မီးလုံးကြားမှာ ကားဘောနပ်အဖုံးရှေ့မှာ ကွဲပြီး အနောက်က မီးလုံးတွေမှာလည်း ကွဲပါတယ် ။ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ပုံစံဆင်တယ်လို့ ထင်ရပေမဲ့ တကယ်တမ်းက သေချာကြည့်ရင် ကွဲပြား သိနိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အေဒီဗန်ကတော့ ဗန်ကား ပစ္စည်းတင်ရန် အကြမ်းသုံးရန် ဒီဇိုင်းကို သိပ်မမိုးမံခဲ့ပါဘူး။ ၀င်းရုတ်မှာတော့ အိမ်စီးကား အမျိုးအစား တစ်ခုအနေနဲ့ သုံးလို့ အဆင်ပြေအောင် ဒီဇိုင်းကို လှပအောင် ပိုလုပ်ထားပြီး အရောင်တွေကို လည်း ရွေးချယ်နိင်အောင် ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ တစ်ပတ်ရစ်တွေကို ပြည်တွင်းမှာ အများဆုံးတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး တစ်ပတ်ရစ်ကားတွေရဲ့ အားသာချက်ကနေတော့ ဈေးသက်သာပြီး ၀ယ်ယူသူကို အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်ဂျင် က ၁၅၀၀ စီစီ အလာများပါတယ်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ ၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၁ တို့ကို အသွင်းများ၊ မှာယူမူများ၊ အစီးများကြပါတယ်။ ဂီယာက အော်တို၊ ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင် ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ရစ်ထဲကပဲ ဂျပန် လေလံ ဆိုဒ်တွေက အမှာများကြတာကို တွေ့နိင်ပါတယ်။ နှစ်ဘီး ယက်လာသလို လေးဘီးယက်လည်း ရှိပါတယ်။ ထိုင်ခုံ ၅ ယောက်စီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်ကား ဖြစ်တဲ့ အတွက် ညာမောင်း ဖြစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရောင်တွေက အပြာရောင်၊ အနက်ရောင်၊ မိုးပြာရောင်၊ မီးခိုးရောင် စတဲ့ အရောင်စုံတွေကို ရွေးနိင်ပါတယ်။
အတွင်းခန်းတွေကလည်း သိပ်မကွဲပါဘူး ။ သူလည်း အေဒီဗန်လို ပုံစံ အနည်းငယ်ထူးပါတယ်။ အနောက်ခန်းတွေလည်း ကျယ်ပြီး မှန်အမည်းတွေကားတွေ လည်းလာပါတယ်။ အိမ်စီးကား ပုံစံ ပိုပေါက်သွားတာကို တွေ့နိင်ပါတယ်။ သူရဲ့ ပုံစံတူ ၊ ပုံစံဆင်ပြီး အခြားကားတွေအနေနဲ့ ဟွန်ဒါ ပါတနာကို တွေ့နိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အေဒီဗန်ကို ၂၀၀၆ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ ၀င်းရုတ်ကိုတော့ ၂၀၀၅နှစ်ကုန်လောက်ကတည်းကထုတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နစ်ဆန်း တီတာနဲ့လည်း တူပါတယ်။ ၀င်းရုတ်က လေးဘီးယက် စနစ်ရနေတဲ့အချိန်မှာ အေဒီဗန်က နှစ်ဘီးမောင်းသာ လာပါသေးတယ်။ စမတ်ကီးတွေကို ၂၀၀၆ လောက်မှာ စတင် တပ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ ၀င်းရုတ်မှာ ဂျီပီအစ်စ် လမ်းညွှန့် စနစ်တွေကိုလည်း ရနိင်ပါတယ်။ အေဒီဗန်ကိုတော့ ခရီးသည်နေရာမှာ အဲဘတ် ( လေအိတ်) မပါဘဲ ရောင်းချခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ မေမှာ စပြီး စံနှုန်း တစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။
အေဒီဗန်တွေထက် အရောင်အသွေး စုံလင်တဲ့ နစ်ဆန်း ၀င်းရုတ်တွေ ဖြစ်ပြီး ၁၇ လက်မရှိတဲ့ ဘီးတွေ၊ နောက်မှန် အမည်းတွေနဲ့ေ၇ာက်ရှိလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်း တွေ စုံစုံလင်လင် ပါရှိလာတဲ့ နစ်ဆန်း ၀င်းရုတ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မော်ဒယ်မြင့်တွေမှာ ပိုပြီး စတိုင်ကျလာတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ပတ်ရစ် မော်တော်ကားများ အတွက် နှစ်အလိုက်ကို ဈေးက ကွာသွားပါတယ်။ ၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၁ စတဲ့ ခုနှစ် မော်ဒယ်လ်များကို အတွေ့ရများပြီး အေဒီဗန်ထက် ဈေးမြင့်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကတော့ ၁၂၀ သိန်းလောက်ကနေစပြီး ၁၄၅ လောက်ထိ ပေါက်ပါတယ် ။ ဈေးတွေကိုတော့ ကားရဲ့ အရောင်၊ လေလံ ဂရိတ်တို့ပေါ်မူတည်ပြီး အမျိုးမျိုး တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရောင်အသွေး လှပမှု အပြင် အေဒီဗန်ကဲ့သို့ အကြမ်းခံမှုကို ထပ်မံပေါင်းထည့်ထားခဲ့တဲ့ နစ်ဆန်း ၀င်းရုတ်တွေကို ၁၅၀၀ စီစီမှာ အများဆုံးတွေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းခန်းတွေက အေဒီဗန်ကိုမှ ပိုမိုလှပအောင် ဒီဇိုင်းဆန်းထားတဲ့ ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အ်ိမ်စီးနဲ့ အခြား စီးနှင်မှု ရည်ရွယ်ချက်များ အဖြစ် သုံးနိုင်တဲ့ နစ်ဆန်း ၀င်းရုတ်များ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိပ်ဆုံး Nissan မော်ဒယ်